टी—२० क्रिकेटको उपाधि पोखरा क्रिकेट क्लबलाई - Kheladi News Kheladi News
टी—२० क्रिकेटको उपाधि पोखरा क्रिकेट क्लबलाई
पोखरा(खेलाडी न्युज)- अघिल्ला दुई खेलमा व्याटिङमा खासै प्रभावकारी रन जोड्न नसकेका गोविन्द प्रधानको ५९ रन प्रेरित पोखरा क्रिकेट क्लबले राईजिङ क्रिकेट क्लबलाई ९९ रनले पराजित गर्दै दी युनाईटेड गोल्डमार्ट टी—२० क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ । पोखरा रंगशालास्थित क्रिकेट मैदानमा भएको फाईनल खेलमा ५९ रन बनाउँदै चार विकेटको क्षतिमा १८९ रनको विशाल स्कोर तयार पा¥यो । किशोर महतोको व्याटबाट पनि ४६ रन निस्कियो । उनी अविजित रहँदै इनिङ टुग्याए । रिजन प्रजुले भने केवल २० रन बनाई पवेलियन फर्किए । राजु तामाङ र कृष्ण पौडेलले २-२ विकेट लिन सफल भए ।
१९० रनको लक्ष्य पछ्याएको राइजिङ क्रिकेट आयोजकसामु निरीह बन्यो । निर्धारित २० ओभर खेल्दा ६ विकेटको क्षतिमा ९० रनमै समेटिँदा उपविजेतामै चिक्त बुझायो । राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी करण केसीको एकेडेमीबाट पुर्व राष्ट्रिय खेलाडी दिपेश खत्री राईजिङको जर्सीमा क्रिजमा उत्रिएका थिए । खत्रीले २७ रन बनाए । राईजिङको लागि सर्वाधिक रन थियो । मनोज कोइरालाले १९ रन जोड्दा राजु गुरुङ १३ रनमा नटआउट रहे । पिसिसीका दिपेश श्रेष्ठले चार ओभरमा जम्मा १३ रनमात्र दिएर २ विकेट लिए । ऋषिकेश शर्मा र चन्द्रकुमार गुरुङले एक–एक विकेट लिए । ३८ बलमा ५९ रन जोड्ने गोविन्द प्रधान फाइनल म्यान अफ द म्याच बन्दै २५ सय २५ रुपैंया प्राप्त गरे ।
उपाधिसँगै विजेता टीमले नगद ४० हजार तथा उपविजेता राइजिङ एकेडेमीले २० हजार नगद साथमा शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरे । प्रतियोगितामा म्यान अफ दि सेरिज पिसीसीका प्रदीप रावत (७३ रन ६ विकेट) बने । उनले सेभेन बी फोनजोनका तर्फबाट मोबाइल सहित ७ हजार ५०० रुपैंया बराबरको क्रिकेट सामाग्री प्राप्त गरे । विधागत रुपमा बेस्ट ब्याट्सम्यान पिसीसीका रिजन प्रजु (१३२ रन), बेस्ट बलर सांग्रिला क्रिकेट क्लबका विपिन खत्री(७ विकेट) बन्दै क्रिकेट सामाग्री प्राप्त गरे । प्रजुले आफूले पाएको ब्याट सोहि अवसरमा आफूलाई मन परेका खेलाडी मुस्कानलाई प्रदान गरे । जुनियर टीम पोखरा क्रिकेट एकेडेमीका १० वर्षीय सोहिल कुँवर बेस्ट इमर्जिङ प्लेयर घोषित हुँदै ५ हजार ५० सहित पुरस्कृत भए ।
विजेता तथा उत्कृष्ट खेलाडीलाई प्रमुख अतिथि नेपाल ओलम्पिक कमिटिका सदस्य तेजबहादुर गुरुङ, नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका पूर्व उपाध्यक्ष तथा कास्की संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. वीरेन्द्रसिंह गुरुङ , क्यानका केन्द्रिय सदस्य ऋषिराम गौतम, मुख्य प्रायोजक दि युनाइटेड गोल्डमार्ट प्रालिका अध्यक्ष प्रितममान बुद्धाचार्य, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति प्रशिक्षण विभाग प्रमुख विद्या मर्सानी, नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च कास्की अध्यक्ष केशव पाठक, बास्केटबल संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष जुमप्रसाद गुरुङ, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पोखरा वडा नं. ३ अध्यक्ष रविन्द्रबहादुर प्रजु, क्लबका अध्यक्ष निकेश श्रेष्ठ लगायतले पुरस्कार वितरण गरेका थिए ।